သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ | PAMPEREDPEOPLENY.COM - အခြား
Hundeshagen ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, LLCd/ ခ / တစ် Hundeshagen စက်မှုလုပ်ငန်း, ၎င်း၏တွဲဖက်များနှင့်ခွဲများ ( Hundeshagen , 'ငါတို့' ဒါမှမဟုတ် 'ငါတို့' ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထားရန်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုများပေးရန်သင့်အားပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ဒီသီးခြားမူဝါဒ ( 'ပေါ်လစီ' ) အတွက် privacy privacy ကိုဖော်ပြသည် www.pamperedpeopleny.com ဝက်ဘ်ဆိုက် 'ဆိုက်' ), Hundeshagen ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်နေသော။ ဤပေါ်လစီသည်သင် Hundeshagen မှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ကောက်ယူသည်၊ ၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သည်ကိုသင်နားလည်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဆိုက်သည်အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိလျက်မစုဆောင်းပါ။ မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုချက်မပါဘဲအသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမိသည်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသည်ကိုလေ့လာလျှင်၊ ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးတစ် ဦး ထံမှသို့မဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ privacy@pamperedpeopleny.com ။
အရည် matte နှုတ်ခမ်းနီမည်သို့လျှောက်ထားရန်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မျှဝေခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအချို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝေမျှခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြိုက်များကိုသင်အသစ်ပြောင်းနိုင်သည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် privacy@pamperedpeopleny.com ။ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဆက်သွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ရရှိသောအီးမေးလ်တိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော“ ပယ်ဖျက်ခြင်း” ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိရိယာသို့မဟုတ်အက်ပ်ဆက်တင်များမှတဆင့်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ push အသိပေးချက်များကိုလည်းချိန်ညှိနိုင်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး။ ကယ်လီဖိုးနီးယားလူထုအခြေပြုဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၉၈.၈၃ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အားအသုံးပြုသူများကိုကာလီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သောသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဖော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချို့သောအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုရန်ခွင့်ပြုထားသည် ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုကိုစေရန်, မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ privacy@pamperedpeopleny.com ။
ကွတ်ကီးရင်းမြစ် - pamperedpeopleny.com
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီတင်ထားသောဆိုက်မှသင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းအကြောင်းသင်စုဆောင်းထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် privacy@pamperedpeopleny.com ။ သင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သင်တောင်းခံနိုင်သည် privacy@pamperedpeopleny.com သင်တောင်းခံခြင်းနှင့်သင်ဖယ်ရှားရန်ရှာသောအထူးအသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုသတ်မှတ်ခြင်း။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်မည်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေပါကမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုပြောင်းလဲပစ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုက်မှသင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းကဆိုက်မှဤသို့သောအသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ သို့မဟုတ်လုံးဝဖယ်ရှားရန်မအာမခံနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကော်ပီများကိုမိတ္တူကူးသိမ်းဆည်းထားသည့်စာမျက်နှာများတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားဆိုက်၏အသုံးပြုသူများမှကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးတွင်ပါရှိသည့် 'unsubscribe' လင့်များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသတင်းလွှာများသို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းအီးမေးလ်များမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သင်သည်ဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသရွေ့အကောင့်အတည်ပြုခြင်း၊ ဝယ်ယူမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့သောဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှသင်မထွက်ခွာနိုင်ပါ။
Privacy စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆိုက်ပေါ်တွင်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Hundeshagen Digital Media, LLC ။ , Attn - ဥပဒေရေးရာရေးရာ၊ ပစိဖိတ်ဒီဇိုင်းစင်တာ၊ အနီရောင်အဆောက်အ ဦး အနောက်၊ 750 N. San Vicente Blvd. , 9th Floor, Hollywood , CA, 90069, USA, သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ privacy@pamperedpeopleny.com ။ သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပြုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။ © Hundeshagen Digital Media, LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ Purpleclover နှင့် Purpleclover.com သည် Hundeshagen Digital Media, LLC ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်
မိန်းကလေးတစ် ဦး အထင်ကြီးဖို့ရယ်စရာကိုးကား
သင်၏ဆိုက်တွင်ရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအသုံးပြုခြင်း၊ သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အခွင့်အရေးများ၊ သို့မဟုတ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေအရသင်၏အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးရန်ဆန္ဒရှိမည်ဆိုလျှင်စိုးရိမ်မှုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ Hundeshagen Digital Media, LLC တွင်, Attn: ဥပဒေရေးရာ၊ ပစိဖိတ်ဒီဇိုင်းစင်တာ၊ အနီရောင်အဆောက်အ ဦး အနောက်၊ 750 N. San Vicente Blvd. , 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ privacy@pamperedpeopleny.com သို့မဟုတ် 1-866-522-5025 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
Hundeshagen ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, LLCd/b/aHundeshagen Industries, ယင်း၏တွဲဖက်များနှင့်လက်အောက်ခံများ ('Hundeshagen', 'we', 'us' သို့မဟုတ် 'our') သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုများပေးရန်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ (မည်သို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်ဟူသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီ ('ပေါ်လစီ') သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုဖော်ပြသည် www.pamperedpeopleny.com ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် ('ဆိုက်') သည်ဟွန်ဒက်စ်ဂင်နင်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်စေသည်။ ဤပေါ်လစီသည်သင်၏အချက်အလက်များကို Hundeshagen မှဒေတာထိန်းချုပ်သူအဖြစ်မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်၊ ထုတ်ဖော်ပုံကိုရှင်းပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တည်ခင်း is ည့်ခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုယူအက်စ်အေ၊ ဥရောပသမဂ္ဂထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်မှုနိမ့်ကျသောတိုင်းပြည်ရှိကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဥရောပသမဂ္ဂမှနေထိုင်သူများအားကမ်းလှမ်းသည်နှင့်အမျှ Hundeshagen သည်ဥရောပဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေများအထူးသဖြင့် EU အထွေထွေဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်း (GDPR) ကိုလိုက်နာသည်။
ဆိုက်သည်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိဘဲစုဆောင်းထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများ၏ခွင့်ပြုချက်အားအတည်ပြုချက်မပါဘဲအသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမိသည်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်ပါမည်။ ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးတစ် ဦး ထံမှသို့မဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ privacy@pamperedpeopleny.com
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရာတွင် Hundeshagen မှမှီခိုသည့် GDPR အောက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ဥပဒေရေးရာအပြောင်းအလဲဆိုင်ရာအမျိုးမျိုး၏အတိုင်းအတာကိုရှင်းပြထားသည်။
သဘောတူညီချက် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်သဘောတူထားသည့်နေရာတွင် (ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပုံစံဖြင့်တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး) privacy@pamperedpeopleny.com
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခြားဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအခွင့်အရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ နှင့်အခြားသူများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို Hundeshagen ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဝယ်ယူသူသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားပေးလိမ့်မည်။
Hundeshagen သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်ပြီး GDPR တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဒေတာထိန်းချုပ်သူအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဝေမျှထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
EEA ပြင်ပရှိနိုင်ငံအချို့သည်ဥရောပကော်မရှင်မှ EEA အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေများကဲ့သို့တူညီသောကာကွယ်မှုများကိုပေးသည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည် အီးယူအချက်အလက်ကာကွယ်မှုဥပဒေများအရဟွန်ဒက်စ်တောင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသို့လွတ်လပ်စွာလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ privacy@pamperedpeopleny.com သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတင်ပို့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးသောအကာအကွယ်များမိတ္တူတစ်စောင်ကိုသင်တွေ့လိုလျှင်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအချို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝေမျှခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြိုက်များကိုသင်အသစ်ပြောင်းနိုင်သည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် privacy@pamperedpeopleny.com ။ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဆက်သွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ရရှိသောအီးမေးလ်တိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော“ ပယ်ဖျက်ခြင်း” ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိရိယာသို့မဟုတ်အက်ပ်ဆက်တင်များမှတဆင့်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ push အသိပေးချက်များကိုလည်းချိန်ညှိနိုင်သည်။
Privacy စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ။ သင့်အနေဖြင့်ဆိုဒ်များရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုရှိပါက Hundeshagen Digital Media, LLC မှဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာရေးရာ၊ ပစိဖိတ်ဒီဇိုင်းစင်တာ၊ အနီရောင်အဆောက်အ ဦး အနောက်၊ 750 N. San Vicente Blvd. , 9thအရှေ့ပိုင်းဟောလိဝုဒ်ကြမ်းပြင်၊ CA၊ ၁၃၁၂၃၁၂၊ ယူအက်စ်။ အေသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကို privacy@pamperedpeopleny.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပြုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။
© Hundeshagen Digital Media, LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ Hundeshagen နှင့် pamperedpeopleny.com သည် Hundeshagen Digital Media, LLC ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်